Fallout Shelter 1.13.21 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.13.21 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Fallout Shelter
Fallout Shelter ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
** Google က ** 2015 ၏အကောင်းဆုံး Play
တစ်နှစ်တာ၏မိုဘိုင်းဂိမ်း - 2016 အန်စာတုံးဆုပေးပွဲ
Winner 2015 ရွှေ Joystick တို့အကောင်းဆုံး Handheld / မိုဘိုင်းဂိမ်း
"ကိုယ့်အထဲကအဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအခမဲ့-to-ကစားဂိမ်းဖြစ်နိုငျ" - GamesBeat
"E3 2015 သေချာသလောက်ကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း" - Gizmodo
"ထပ်မံကျ Shelter ငရဲအဖြစ်ကစားရန်ရိုးရှင်းပြီးစွဲလမ်းဖြစ်၏။ " - GameZone
THE အကောငျးဆုံး Vault ညျဆောကျ
တောက်ပအနာဂတ် Create ... မြေအောက်! Vault ဘဝများ၏အလွန်ရုပ်ပုံသို့အခွခေိုငျ၏ 2,000 ခွကေိုအောက်တစ်ခုတူးဖော်ဖွင့်ဖို့ကျြမှောကျခတျေခန်းအမျိုးမျိုးကနေရွေးချယ်ပါ။
သင့်ရဲ့နေထိုင်သူကိုသိနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုမှသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရယူပါ။ သူတို့ရဲ့စံပြအလုပ်အကိုင်များရှာပါနဲ့သူတို့အပွင့်လန်းစောင့်နေကြလော့။ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်မတ်မတ်, လက်နက်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သူတို့ကိုပေး။
Craft နှင့်အတူအသုံးဝင်သောပစ္စည်းများကိုသို့တန်ဖိုးမရှိ junk Turn! အဆိုပါ Barbershop အတွက်မဆိုနေသော၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
တစ်ဦးကကောင်းကောင်း run Vault ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုရောနှောနှင့်အတူနေထိုင်သူတစ်ဦးအမျိုးမျိုးလိုအပ်သည်။ အသစ်ကနေထိုင်သူကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရေဒီယိုခန်း Build ။ သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝအသက်တာ၌တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍ ယူ. , အောင်သွယ် play နှင့်မီးစများ၌၎င်းပျံသန်းစောင့်ကြည့်!
ကျန်ရစ်သည့်ပျက်သောစပါးမျက်နှာပြင်စူးစမ်းခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုရှာမြေပြင်အထက်နေထိုင်သူ, နေရာလေးကိုရှင်သန်မှုပြန်ပေးလော့, ဒါမှမဟုတ် ပြော. အသေခံပို့ပါ။ အတှေ့အကွုံရရှိအသစ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်လက်နက်များ Find နှင့်စာလုံးကြီးဝင်ငွေ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသေပါလေစေဘူး!
သင့် Vault ကာကှယျ
အခြိနျမှနျမှ, idyllic Vault ဘဝ Post-နျူကလီးယားအသက်တာ၏အန္တရာယ်များသဖြင့်နှောင့်အယှက်နိုင်ပါသည်။ ပြင်ပကနေခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရန်သင့်နေထိုင်သူပြင်ဆင်ပါ ... နှင့်အတွင်း။
Vault-Tec tools တွေကိုပေးထားပေမယ့်အရာကြွင်းလေသငျသညျအထိဖြစ်ပါတယ်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အခမဲ့ယနေ့သင်၏အ Vault တည်ဆောက်ခြင်းစတင်ရန်။
Fallout Shelter အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Fallout Shelter အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Fallout Shelter အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Fallout Shelter အား အခ်က္ျပပါ
fenyxviii စတိုး 118 144.9k
Fallout Shelter ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Fallout Shelter အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.13.21
ထုတ်လုပ်သူ Bethesda Softworks LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://privacy-policy.truste.com/certified-policy/mobile/app/en/zenimax-apple.com/index.html
လက်မှတ် SHA1: 56:97:A3:D7:E2:23:6B:82:78:DD:85:1E:EC:6F:D5:DE:05:A9:30:60
အဖွဲ့အစည်း (O): Behaviour Interactive
Fallout Shelter APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ